7 GEEDAHA UGU KARSAN EE BEERTAADA - WARARKA
Imaanshiyaha dalka ka imanaya magaalada cufan ka dib toddobaadka shaqadu waa laban laaban yahay haddii hawadu ka buuxsanto ariishyada quruxda badan ee ubaxyada ubaxyada.
Nacfacidda raaxeysiga ah ayaa ciyaari doonta doorka aromatherapy, kaa caawinaya inaad nasato, wuxuu kor u qaadi doonaa naftaada, hagaajinta caafimaadkaaga.
Marka ubax, geedaha intooda badani waxay saliid noqdaan saliid muhiim ah oo leh caraf udgoon.
Dhowr dhir ah oo dhir ah ayaa leh ur xooggan oo ah in qofku awood u leeyahay in uu dareemo masaafo badan.
Dhirta la aqonsan yahay way yaqaanaan mid kasta oo naga mid ah, oo aan garanayno oo aan u qalmin in ay iloobaan dadka degaanka.
Of noocyada kala duwan ee xayawaanka dhexe ee duurka lilac caadiga ah. Warshad taajir ah waxay gaartaa dhererka 6-7 mitir.
Caleenta baaxada leh, madaxyada cufan ee ubaxa ah ee midabada cad, midab ama casaan leh ayaa abuuraya cimilo gaar ah.
The warshad Blooms May. Dhiirrigelinta ariga hodanka ah waxaa laga dareemey meel fog.
Doorasho dheer ee dhirta of Rosehip qoyska keentay in la abuuro ee boqoradda of beerta - Rose. Quruxda qorraxdu waxay ka muuqataa gabayadii Giriigii hore, frescoes of Persia iyo Rome.
Noocyo badan oo kala duwan ayaa kuu oggolaanaya inaad doorato midabka, ubaxa ubaxa, waqtiga ubax. Ha iloobin in noocyada noocaas ahi aysan lahayn dabacsanaan adag. Ubaxa wuxuu u muuqdaa mid cajiib leh bucshir iyo qaabka dabiiciga ah, on baadiyaha.
Waxaa ka mid ah xayawaanka semi-qallafsan ama ku xoqan waxaa jira noocyo gaadhaya ilaa 2 mitir. Dhirta ubaxyada ubaxyada ubaxa ah ee ubaxyada laga bilaabo May ilaa June.
Ubax, casaan ama ubax guduudan ayaa lagu soo ururiyaa racemes iyo corymbose inflorescences. Nafaqada macaan ee macaantu waxay abuureysaa jawi firfircoon.
Dhirta ilaa 3 mitir ee sare waxay leeyihiin taaj saran oo laamood oo toosan. Xilliga xagaaga horaantii ubaxyada ubaxyada. Ubaxyo cadaan ah ayaa ku yaala inflorescences, waxay bixiyaan ur adag, adoo ah cayayaanka strawberries.
Viburnum af ingiriisi
Warshadu waa digaag saddex-mitir leh oo leh farshaxan badan.
Waqtiga ubaxu waa dhammaadka guga iyo bilowga xagaaga.
Ubax cad ayaa lagu diyaariyaa qaababka kubadaha. Awom awood leh ayaa laga dareemay meel fog.
Kala duwan waa thermophilic, sidaas darteed waa la doorbidi karaa in ay u koraan warshad cimilada dabiiciga ah.
Cagaarka cagaarka ah
Dhirta Evergreen waxay gaartaa dherer ah oo ku saabsan hal mitir. Waxay ku koraan sababtoo ah faraca nidaamka xididka, sameynta cawska cufan.
Dabayaaqadii Abriil, duurka waxaa lagu daboolay ubaxyo ubax jaale ah oo leh duufaan la'aan, oo la mid ah urka ubaxa dooxada. Biel wuxuu leeyahay ur adag. Waxay inta badan dhacdaa koonfurta dalka.
Laamaha geedka ee geedka ayaa hoos loo dhigaa. Buundooyinka waxay gaaraan dherer laba mitir ah. Korilipsis lowing-blooms ee guga. Ubax ayaa u muuqda ka hor caleemaha. Inflorescences burushka jaalaha ah waxay u egtahay godka.
Iyada oo dhamaadka caleemaha ubax muuqan. Nacnacaadu waa uuxul sida cirrid. Si fiican u koraan dhirta gobollada koonfureed ee dalka.
Saameynta ugu weyn ee dhirta kareemka ah waxaa lagu gaari karaa iyadoo la beerto duurka ku xigta daaqadaha, kursiga, gaasaska ama dhinacyada wadooyinka. Xayawaanku waxay samayn doonaan dayr wanaagsan oo dumin kara urka compost ama digada.